CIYAARAHA 5 CIYAARO BADAN - Koodhadh Lacageed Online ah
KOOXAHA TOP 5 SCARY
Posted on November 23, 2019 author Andrew	Comments Off on TOP 5 GALMUDUG GUUD
*Digniin* Waxaad gashay NetEnt Casino cabsi-zone, oo lagusoo bandhigayo booska leh jawiga freakiest, astaamaha lafdhabarta ugu fiican iyo mushaaraadka ugu badan ee timaha lagu bixiyo (kuwani wali waa ciyaaraha casino ka dib!)
Xirashada xafaayadaha waaweyn, haddii aad wax yar ka baqdo, waa mid bulshada dhexdeeda laga aqbali karo, marka kor u qaad waraaqahaas oo aan bilowno ...
1) Baneedka Wolf
Pablo Escobar, dhiirrigelinta Narcos, wuxuu si sumcad darro ah u siiyay kuwa la tartamaya laba xulasho - lacag ama hoggaan.
Heshiiska 'Wolf's Bane' waa mid aad u qaldan - lacag ama geeri. Hadaadan haysanin rasaasta qalinka ah, waxaad qado u tahay tuug xumaan iyo cabsi badan.
Tani 5 reel, sadarka 3 iyo 10 payline booska waxay leedahay astaamo badan oo xiiso badan oo kaa dhigaya inaad ciyaarta sii dheereysato, iyadoo aan loo eegin sida qulqulaya aad adigu u tahay dhawaqa dhawaaqa.
Taasi waa runtii waxbaa sheegaya sababtoo ah dhawaqa cimilada leh ee cimilada leh ayaa runtii gacan ka geysanaya ciyaartaas wax gaar ah, markaa hambalyo kooxda naqshadeynta codka ee NetEnt!
Hubi codka dhawaqa dhawaaqa adiga oo gujinaya qeybta hoose:
Casriyeynta Kubadda Cagta
Kuleylka kulul ee Forex
Khadka tooska ah ee kulul
Qadka Dhex-dhexaadka ah
Kusoo daayo Casino
Khamaarka Star Casino
Manhattan naadi Casino
2) Xiddigta Halloween
Dad badan ayaa Halloween ku bixin doona inay bilaa sharci noqdaan - laga yaabee inay tijaabiyaan qaar ka mid ah joodarlada loo yaqaan 'Halloween cocktails' - laakiin waxaan rajeyneynaa inaysan madax noqon doonin, sida xiddigta 'Hollywood' ee 'Hollywood Jack'.
Hadaad jeceshahay khuraafaadka, cadaabta jaleeca iyo madax bocorka la goostay - Ciyaartan ayaa adiga loogu talagalay. Waxay ku saleysan tahay sheekada naxdinta leh ee ku saabsan Horseman Headless, oo ah jahwareer aad u xun oo raadinaya noggin.
Kuwa sida aadka ah u dhexdeena ah ee jecel uun ciyaar ciyaar fiican, kan ayaa sidoo kale ah mid weyn oo loo doorbiday sababtaas.
Xannuunka loo yaqaan 'Halloween Jack' waa a 5 reel, xargaha taxanaha 3 oo leh khadadka mushaarka go'an ee 20 oo leh astaamo badan oo xiisa leh sida Socodka Duurjoogta ah, Spins Free iyo gaar ah “Jack 'o' LectorHabka.
Muxuu khaas u yahay habkan? Hagaag, waxaa laguu xilsaaray aruurinta astaamaha laambada ee ku yaal tuubada caloosha, taas oo kugu abaal marin doonta 1 ee 3 raaxo leh astaanta Duurjoogta:
Nalalka 3 = Jaakad Xun oo Xun oo Xun
Nalalka 6 = Jaakad xiran 'Jack' o 'Laysta Duur
Nalalka 9 = Dhimashada Xayawaanka Dila ee Duurjoogta ah
3) Dhibbanayaasha Dhiigga 1 iyo 2
Haddii aad harraadsan tahay wax casaan ah, diiran oo udgoon macdanta, ka dib waxaan kuu helnay laba kulan.
Taxanaha Dhiigga ee 'NetEnt's Bloodsuckers' waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, wuxuuna ku bixiyaa cibaadada labada dabeecad iyo midka saafiga ah ee nooca vampire.
Dhibbanayaashii ugu horreeyay ee Dhiig-baxa wuxuu ahaa guul deg-deg ah oo wuxuu noqday mid ka mid ah cayaaraha aasaasiga ah ee ciyaarta khamaarka ee lagu ciyaaro xilligan sannadkan - waan hubaa inaad qiyaasi kartid sababta!
Tani 5 reel, safka 3 iyo khadka mushaarka 25 Ciyaarta waxay leedahay astaamo badan oo ay ka mid yihiin mid gaar ah 'Ciyaarta gunnada Vampire Hunt '.
Inta lagu guda jiro astaantan, waxaa kugula kulmi doona qafis xabaal duug ah. Hadafkaagu waa inaad furato dambaska si loo muujiyo suurtagalnimada vampire.
Baabuur kasta oo aad hesho waxaad ka heli doontaa qadaadiic. Haddii aad hesho badal halkii aad ka heli lahayd, ciyaarta gunnadu way dhammaan doontaa.
Dhibbanayaasha Dhiigga 2
Sequels waa habaar, waa wax aad u adag in la sameeyo ciyaaraha 2nd ama 3rd kuwaas oo caan ku ah sidii hore.
Hagaag, vampires-yada dhiig-baxayaasha 2 waa la inkaaran karaa (oo harraad dhiig qaba), laakiin ciyaarta lafteeda lama habaarin!
Iyadoo a saamiga dib-u-ciyaar heer sare ah ee 98%, muuqaallo la wanaajiyey iyo astaamo dheeri ah - Dhibbanayaashu Dhiigyacab 2 ayaa isbarbar dhiga, haddii aan la dhaafin caanka ka horreeyay.
4) Burcad Badeedda
Hal-Eyed Ed, Peggy Rotten, Polly iyo Mad Monkey waa “qeyb ka mid ah markabka iyo qeyb ka mid ah shaqaalihii markabka” kuwaas oo culeys weyn ku haya kooxaha Burcad Badeedka NetEnt.
Waxaa laga sii daayay 2013, gundhiggan wuxuu si cad saameyn ugu yeeshay taxanaha burcad-badeedda taxanaha ee Caribbean-ka, laakiin wuxuu fikradda siiyay madadaalo iyo sawir gacmeedyo.
Ma maanta ayey taagan tahay? Marka laga eego aragtida muuqaalka, dhab ahaantii waa mid da 'weyn - oo u muuqata mid midab leh, madadaalo leh oo xiiso badan sidii ay ahayd sannadihii 6 ka hor.
Waxaa jira la arki karo la'aan astaamo gaar ah in kastoo, summad calaamad u tahay cayaaraha NetEnt oo casri ah, sidaa darteed ciyaartu waxay bilaabmaysaa inay dareento inay u egtahay sida buskudka markabka muddo kadib.
Hagaag, waxaan waxyar ku khiyaameynaa halkan. Afka 'NetEnt's Ozzy Osbourne' si rasmi ah uma furmayo illaa 21st November 2019, laakiin waa inaan ku darin liiskan maxaa yeelay runtii aad ayaan ugu faraxsanahay.
Sikastaba, Ozzy wuxuu dhadhamiyay madaxa tuugada shaydaanka awgood - haddii uusan ku jirin liiska hal abuurka ah ee 'Halloween', waa kuma qofka?
NetEnt waxay sharfayaan amiirka mugdiga iyagoo leh ciyaar qaas ah oo ay ka muuqdaan waxyaabo badan oo kaa ilaalin doona inaad taam ahaato saacadda tareenka waalan.
Maraadineysaa Lacag Bixiyeyaasha Halloween?
Marka laga hadlayo NetEnt Casino, Halloween waa wax si weyn nooga weyn. Waxaan freakin jecel nahay.
Taasi waa sababta aan ugu dhibnay kooxdeena naqshadeynta si loo abuuro waxyaabo badan oo yaab leh oo cajiib ah Halloween Graphics iyo xitaa la abuuray bog gaar ah oo loogu talagalay casino Halloween Gunooyinka.
Haddii aad joogtid oo aad daawatid xoogaa filimo cabsi leh ama aad u labisato si aad uga cabsiiso deriskaaga Halloween-kan, waxaan rajeyneynaa inaad mid wanaagsan leedahay!
Lacagaha ugu fiican ee casimada:
50 no deposit bonus casino at Silk Casino
125 free dhigeeysa bonus casino at Suomi Vegas Casino
140 no deposit bonus casino at BetSpin Casino
75 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit at Stanjames Casino
60 free dhigeeysa casino at Royalbloodclub Casino
120 no deposit bonus casino at Next Casino
125 no deposit bonus ee Insta Casino
105 free dhigeeysa bonus at Optibet Casino
105 oo lacag la'aan ah ma bonus deposit at Casino ahee
140 free dhigeeysa bonus casino at BGO Casino
25 free dhigeeysa bonus at Bet365 Vegas Casino
135 free dhigeeysa casino at SuomiAutomaatti Casino
115 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit at Rules Casino
35 free dhigeeysa casino at MyJackpot Casino
100 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit at SuperLenny Casino
150 dhigeeysa free at Kolikkopelit Casino
20 no deposit bonus casino at Comeon Casino
90 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit at MyJackpot Casino
75 dhigeeysa free at 24hBet Casino
45 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit ee Red naadi Casino
120 no deposit bonus casino at caga Page Casino
50 oo lacag la'aan ah ma bonus casino deposit at CrazyScratch Casino
105 no deposit bonus casino at VegasPlay Casino
65 free dhigeeysa casino at SlottyVegas Casino
150 oo lacag la'aan ah ma bonus deposit at Pokies Casino
0.1 1) Baneedka Wolf
0.2 2) Xiddigta Halloween
0.3 3) Dhibbanayaasha Dhiigga 1 iyo 2
0.3.1 suckers dhiigga
0.3.2 Dhibbanayaasha Dhiigga 2
0.4 4) Burcad Badeedda
0.6 Maraadineysaa Lacag Bixiyeyaasha Halloween?
3 Lacagaha ugu fiican ee casimada: